Akụkọ - 5 akwa nke na-ebute oge oyi oyi kacha njọ
Kwa ọnwa Nọvemba ị wepụtara uwe mwụda kachasị amasị gị nke na-arụ ọrụ nke ọma na sweta dịka ọ na-eme uwe elu nwanyị silky. Ma ụbọchị ole na ole, eriri ụkwụ gị na-arị elu n'úkwù gị nke abụọ ị ga-apụ n'èzí. Akụkọ ọjọọ:'ve nwere ọnọdụ. Iji zere ọnọdụ ọ bụla na-enwu na mberede, lee ákwà ise ndị kachasị njọ - na ịkụ nzọ dị nchebe karịa.
ỌR THAT NA-EME AKWATKWỌ
1. Ajị anụ. Maara ntutu ya na-eme ka ntutu dị mma. Ma gịnị kpatara igwe eji kee gị ga-adị otu ahụ? Ihe omumu sayensi: Umu ahihia anumanu zoro ezo, microscopic mmiri n'ime ahihia, na-eme ka ndi mmadu choputa (ya bu, static).
2. Ajị anụ. Otu ihe mere ajị anụ — mana ọ ga-akawanye njọ ebe ọ bụ na ajị anụ ka nwere ihe okike.
3. Silk. Onye ọ bụla bụ onye na-nwara a ileghara uwe gburugburu ememe ọkọkpọhi ya.
4. Polyester. Sịntetik akwa dị ka naịlọn tights enweghị mmiri-enweghị mmiri. (Woohoo!) Mana gburugburu akọrọ na-abụkwa ndị insulators eletriki. (Womp, womp.) O di nwute na nke putara faux fur bu uzo ozo-ise na-arapara.
5. Rayon. Gịnị banyere ọkara sịntetik, ị na-ajụ? N'agbanyeghị emepụta akọrọ ọnọdụ. (Ekele, osisi pulp.) Ya mere, kpachara anya maka uwe elu nwanyị niile na-acha silk gị nwere ike ịgagharị na ebe ndị a na-atụghị anya ya.
Akwa nke na-emeghi onodu onuma
1. Owu. N'ezie, akwa nke ndụ anyị na-anọpụ iche. Oge obula ichoro onodu ogba-adighi anya, rute aka maka denim gi, chinos, tees, botini, cardigans na jaketị ubi.
2. Akpụkpọ anụ. N’ebe ụfọdụ n’ime usoro tan tan ahụ, jaket moto gị ga-efunahụ omume ya. O nwekwara ihe ọzọ mere o ji akụ gị.
N’ezie, anyị anaghị agwa gị ka ịfere akwa ọ bụla n’elu ndị ọzọ. ('Ihe kpatara, ee, mgbe ole ka ị ga-eyiri ajị anụ?) Naanị ihe ncheta enyi iji tinye usoro ọgwụgwọ ndị a: Jiri ihe ncha akwa na-asa; ete ya na ngwa ihicha; spritz na ntutu ntutu (ma ọ bụ mmiri); gbafue efere igwe; ma ọ bụ obere na ntụtụ nchekwa.